GeForce Iye zvino yakanakisa Cloud Gaming chirevo, asi vamwe vanogadzira havana kugutsikana zvachose | Linux Vakapindwa muropa
GeForce Iye zvino yakanakisa Cloud Gaming chirevo, asi vamwe vanogadzira havana kugutsikana zvizere
NVIDIA yakatanga yayo Cloud Mitambo kutanga kwaFebruary uye chakaonekwa sechinhu chakanakisa izvo zvinogona kukwikwidzana neavo vatove pamusika nhasi. Asi mwedzi mumwe chete gare gare kuvambwa kwebasa, GeForce Iye zvino iri kurasikirwa nemazita akanakisa yakaridzwa papuratifomu yako.
Uye ndizvo izvozvo Hinterland Mitambo yakafunga kubvisa mutambo wayo kubva kusevhisi yemitambo mugore, nekuda kwekusawirirana nenzira iyo Nvidia ari kubata nayo zvinhu. Kubva uchitamba paGeForce Zvino, mushandisi anofanira kunge aine kopi yedhijitari yemutambo muchitoro chakakurumbira se EPIC, Battle.net, Bethesda Launcher, uPlay kana Steam.
GeForce Zvino inoita kuti chero munhu aisezve mitambo yavo mumuchina chaiwo uye uvaridze uchishandisa chikuva chako yemitambo yepamhepo. Izvi hazvienderane nevamwe vaparidzi vemitambo uye vanogadzira, kusanganisira Raphael van Lierop, director uye munyori wemutambo Iyo Yakareba Rima,
Lierop pachake akazivisa vhiki rakapera pa Twitter nhau dzekubviswa kwemutambo, kutsanangura zvakajeka kuti kunetseka kuri kubva kupi.
"Ndine hurombo kune avo vakaodzwa mwoyo nekusakwanisa kutamba Iyo Yakareba Rima paGeForce Izvozvi." NVIDIA haina kutikumbira mvumo yekuisa mutambo papuratifomu, saka takavakumbira kuti vaubvise. Taura zvichemo zvako kuNVIDIA, kwete kwatiri. Vagadziri vanofanirwa kugona kudzora kunopihwa mitambo yavo '.
Naizvozvo, zvinoita sekunge NVIDIA yakapa mimwe mitambo papuratifomu yako, pasina kana kukumbira kubvumidzwa kwevagadziri Uye Lierop haisi kufara kuti Iyo Yakareba Rima yakaverengerwa mune yakabhadharwa vhezheni yeGeForce Zvino pasina mvumo yake yakajeka.
Zvinoita sekudaro kunetsekana kwakafanana kwakatungamira Activision Blizzard neBethesda kubvisa mitambo yavo yepachikuva. Nekudaro, chikonzero chekubviswa kwemitambo nemakambani maviri ichi hachisati chanyatsojeka, nekuti hapana kana mumwe wevaparidzi vaviri uyu akataura zvakajeka nei vaine sarudzo iyi.
Vagadziri vacho havana kutaura zvakanyanya nezvekupokana, ivo vaigutsikana nezvakataurwa zvisina kujeka, izvo zvinoratidza kuti kubvisa kunogona kukonzerwa nekushaikwa kwemari yekugovana kana chokwadi chekuti vaparidzi vemitambo mikuru vanosarudza kubhadharisa vatengi vavo kechipiri rezinesi rakasiyana kutamba mutambo pane yepamhepo yekutamba sevhisi, zvisinei nemaumbirwo ayo.
Google Stadia, semuenzaniso, inobhadharisa vatengi kumitambo, kunyangwe kana vatove navo paStam, uye vazhinji vevaparidzi vakuru vakasaina kune aya mamiriro.
Ipo GeForce Zvino yave iri mubeta kweinopfuura gore, vhidhiyo mutambo wekurangarira unoitika izvo zvino kuti chikuva chinoraja vashandisi yekutamba pamishini yavo chaiyo.
Nharo dzaLierop dzakonzera nyonganiso kune vazhinji vashandisi, kunyanya avo varikushandisa kana kuronga kushandisa GeForce Zvino, izvo hameno kuti nei mugadziri yemitambo unogona kuraira iyo Hardware yako mitambo inotambwa pairi, uye nei NVIDIA yaizoda mvumo yekuita kuti mitambo iwanikwe mumushini chaiwo
Uye ndezvekuti dambudziko rinomuka zvine chekuita nerezinesi remitambo yedhijitari. Muchokwadi, mutambo wedhijitari marezinesi ekushandisa chaiyo yakanaka nenzira yakatarwa nezvibvumirano zelayisensi, zvese nemugadziri wemutambo uye nemusika unoutengesa, mune ino Steam. Uye rezinesi rekutamba mutambo hazvireve kuti imwe kambani inogona kuigovera zvakare, kunyangwe iwe pachako watenga rezinesi.
Ndo izvo zvinoita sekunge zviri kuitika neGeForce Zvino, iyo inobhadharisa vashandisi pamwedzi wega wega kuti vatambe mitambo yavo yavanofarira pane yavo yekushambadzira yemitambo.
Uye ndezvekuti pano inopinda maonero evatengi uye uko gakava rinogadzirwa, mune iro rinosimudzwa nemushandisi pa Twitter:
"Ndingabvunza kuti nei studio ichigona kuraira kwandinogona kuisa nekutamba mutambo wandakatenga." Akawedzera achiti "Tiri kufunga nezvekugadzira mitambo yemahara mune ramangwana? «
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GeForce Iye zvino yakanakisa Cloud Gaming chirevo, asi vamwe vanogadzira havana kugutsikana zvizere
Ernest Huesca akadaro
Pindura kuna Ernesto Huesca
Inogona Geforce Zvino kushandiswa kubva kuLiGNUx?
Kana mhinduro iri HAPANA
Chinyorwa ichi chiri kuitei pano?
Coronavirus inoenderera nekugadzira kutya, kukanzura uye nezvimwe